iPhone မှာ Gradient Wallpaper ကောင်းကောင်းလေးတွေဖန်တီးကြမယ်
6 Apr 2018 . 5:25 PM
iPhone ထဲက Wallpaper တွေကိုပျင်းနေပြီလား။ ပျင်းနေပြီဆိုရင်တော့ သင်ကိုယ်တိုင် Wallpaper ကောင်းကောင်းလေးတွေဖန်တီးလို့ရမယ့် App ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Wallpaper App လေးကတော့ Clarity လို့ခေါ်ပါတယ်။ App Store မှာတော့ Clarity – Wallpaper Editor လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ $0.99 ပဲရှိပြီး ပေးရတာနဲ့တန်ပါတယ်။ App အထဲမှာသုံးနေရင်း ကြော်ငြာတွေတက်လာတာတို့ App ထစ်တာတို့လုံးဝမရှိပါဘူး။ Error တစ်ခုခုရှိရင်လည်း Developer က ဂရုတစ်စိုက် Update လုပ်ပေးတာကြောင့် ဝယ်ရတာနဲ့တန်တဲ့ App လေးတစ်ခုပါပဲ။
App Store မှာ Clarity – Wallpaper Editor လို့ ရှာလိုက်ရင် ရပါတယ်
App ထဲမှာ Wallpaper ဖန်တီးဖို့အတွက် Menu သုံးခုပါပါတယ်။ Mask ၊ Blur နဲ့ Gradient ဆိုတာတွေထဲက တစ်ခုစီကိုသုံးပြီး Wallpaper တစ်ခုကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ Mask ကတော့ iPhone Lock Screen Wallpaper တွေကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Blur ကတော့ Home Screen အတွက် Wallpaper ဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Gradient ကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အရောင်စပ်ထားတာလေးတွေကို နှစ်သက်သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Gradient ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရသလို Ready လုပ်ထားပေးတဲ့ Gradient လေးတွေလည်းပါဝင်တာကြောင့် အလွယ်တစ်ကူ Save လိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။
Lock Screen နဲ့ Home Screen အတွက်သီးသန့်စီ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်
In-App Purchase အနေနဲ့တော့ Clarity Pro ဆိုတာကို $1.99 နဲ့ထပ်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ Pro ကိုထပ်ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ iOS ရဲ့ Photo App ထဲမှာလည်း Clarity နဲ့ပြင်လို့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီအပြင် Gradient ကိုပိုအရောင်စုံသွားအောင် Double Point ကနေ Triple Point ဖြစ်အောင်ထပ်ထည့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pro Version ကတော့သိပ်အရေးမကြီးတာကြောင့် မဝယ်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။ Akhayar ပရိတ်သတ်ကြီးထဲက App ကောင်းကောင်းလေးတွေစိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ ဒီ Clarity App လေးကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ iOS9နဲ့အထက်တင်ထားတဲ့ iPhone ၊ iPad ၊ iPod Touch တွေမှာ ဒီ App လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။
iPhone မှာ Gradient Wallpaper ကောငျးကောငျးလေးတှဖေနျတီးကွမယျ
iPhone ထဲက Wallpaper တှကေိုပငျြးနပွေီလား။ ပငျြးနပွေီဆိုရငျတော့ သငျကိုယျတိုငျ Wallpaper ကောငျးကောငျးလေးတှဖေနျတီးလို့ရမယျ့ App ကောငျးကောငျးလေးတဈခုကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီ Wallpaper App လေးကတော့ Clarity လို့ချေါပါတယျ။ App Store မှာတော့ Clarity – Wallpaper Editor လို့ ရိုကျရှာလိုကျရငျတှနေို့ငျပါတယျ။ $0.99 ပဲရှိပွီး ပေးရတာနဲ့တနျပါတယျ။ App အထဲမှာသုံးနရေငျး ကွျောငွာတှတေကျလာတာတို့ App ထဈတာတို့လုံးဝမရှိပါဘူး။ Error တဈခုခုရှိရငျလညျး Developer က ဂရုတဈစိုကျ Update လုပျပေးတာကွောငျ့ ဝယျရတာနဲ့တနျတဲ့ App လေးတဈခုပါပဲ။
App Store မှာ Clarity – Wallpaper Editor လို့ ရှာလိုကျရငျ ရပါတယျ
App ထဲမှာ Wallpaper ဖနျတီးဖို့အတှကျ Menu သုံးခုပါပါတယျ။ Mask ၊ Blur နဲ့ Gradient ဆိုတာတှထေဲက တဈခုစီကိုသုံးပွီး Wallpaper တဈခုကို စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျး ဖနျတီးလို့ရပါတယျ။ Mask ကတော့ iPhone Lock Screen Wallpaper တှကေိုဖနျတီးဖို့ဖွဈပါတယျ။ Blur ကတော့ Home Screen အတှကျ Wallpaper ဖနျတီးဖို့ဖွဈပါတယျ။ Gradient ကတော့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ အရောငျစပျထားတာလေးတှကေို နှဈသကျသူတှအေတှကျဖွဈပါတယျ။ Gradient ကိုသငျကိုယျတိုငျဖနျတီးလို့ရသလို Ready လုပျထားပေးတဲ့ Gradient လေးတှလေညျးပါဝငျတာကွောငျ့ အလှယျတဈကူ Save လိုကျလို့လညျးရပါသေးတယျ။
Lock Screen နဲ့ Home Screen အတှကျသီးသနျ့စီ ဖနျတီးလို့ရပါတယျ
In-App Purchase အနနေဲ့တော့ Clarity Pro ဆိုတာကို $1.99 နဲ့ထပျဝယျလို့ရပါတယျ။ Pro ကိုထပျဝယျလိုကျမယျဆိုရငျတော့ iOS ရဲ့ Photo App ထဲမှာလညျး Clarity နဲ့ပွငျလို့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီအပွငျ Gradient ကိုပိုအရောငျစုံသှားအောငျ Double Point ကနေ Triple Point ဖွဈအောငျထပျထညျ့ပေးထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ Pro Version ကတော့သိပျအရေးမကွီးတာကွောငျ့ မဝယျလညျးကိစ်စမရှိပါဘူး။ Akhayar ပရိတျသတျကွီးထဲက App ကောငျးကောငျးလေးတှစေိတျဝငျစားသူတှအေနနေဲ့ ဒီ Clarity App လေးကိုသဘောကလြိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျ။ iOS9နဲ့အထကျတငျထားတဲ့ iPhone ၊ iPad ၊ iPod Touch တှမှော ဒီ App လေးကိုသုံးလို့ရပါတယျ။
by Zawyè .6hours ago